Ogaden News Agency (ONA) – Kenya oo Jartay Xidhiidhkii Diblomaasiyadeed ee Soomaaliya.
Kenya oo Jartay Xidhiidhkii Diblomaasiyadeed ee Soomaaliya.
Posted by Dayr	/ February 17, 2019
Dowlada Kenya ayaa jartay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dowlada Soomaaliya kadib markii ay u yeertay safiirkeedii u fadhiya Soomaaliya kuna amartay Safiirka Soomaaliya u fadhiyay dalkeeda in uu iskaga baxo Kenya.
Talaabadan ay dowlada kenya xiriirkii diblomaasiyadeed ugu jartay Dowlada Federaalka dalka ayaa ay dowlada kenya ku sheegtay kadib markii dowlada Soomaaliya ay iska indho tirtay waxa ay ku sheegtay xaraash ka dhan ah hantida Kenya sida laga soo xigtay.
Mr Macharia Kamau ayaa go’aankan ku qeexay mid ay dowlada Kenya uga dhiidhinayso xadgudub uu sheegay in Dowlada Federaalka Soomaaliya ku sameysay sooh dimaha xadka dhanka badda ee ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya waa sida uu sheegaye.
Go’aankan ay dowlada kenya ay ugu yeedhay safiirkeedii u fadhiyay Soomaaliya isla markaana u jartay cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Dowlada dhexe ee Soomaaliya ayaa noqonaya kii ugu cuslaa oo ay qaadato dowladan dariska la ah dalka lamana oga sida ay uga falcelin doonto dowlada dhexe ee dalka.
Si kastaba ha ahaatee shantii bishan Febraayo ayay ahayd markii magaalada London ee wadanka Ingiriiska lagu qabtay shir ay soo qaban qaabisay shirkada Spectrum kaas oo lagu soo bandhigayay maclumaad la xiriira sahmin shidaal oo laga sameeyay badda dheer ee Soomaaliya.